Calcium Carbonate vatengi uye fekitori - China Calcium Carbonate Vagadziri
Yakanaka kwazvo inorema calcium carbonate
Heavy-mhando calcium carbonate inogadziriswa kubva yakakwira-kuchena kwechisikigo calcite. Chinhu chikuru chinonzi CaCO3. Iyo ine yakagadzika makemikari zvivakwa, ingangoita isinga nyungudike mumvura, gobvu rekristaro dhizaini, yakatsetseka pamusoro, yunifomu inove saizi, yakanaka yekugadzirisa mashandiro, uye yakaderera DOP oiri yekumwa.
Yakakwirira gloss calcium carbonate
Yakakwira-gloss calcium carbonate inogadzirwa kubva kumusoro-kuchena kwechisikigo calcite. Chinhu chikuru chinonzi CaCO3. Iyo ine yakagadzika makemikari zvivakwa, ingangoita isinga nyungudike mumvura, gobvu rekristaro dhizaini, yakatsetseka pamusoro, yunifomu inove saizi, yakanaka yekugadzirisa mashandiro, uye yakaderera DOP oiri yekumwa.
Inoshanda Nano Calcium Carbonate
Nano calcium carbonate yakagadzirirwa neakakura uye epamberi nzira yekabhoni, iyo ine zvakanakira yakaderera density, yakachena kuchena, kwakanaka kupararira uye kwakakwira rheology.
Inoshandiswa zvakanyanya mukuzadza kunoshanda kwerabha, mapurasitiki, kupfeka, inki, nezvimwewo, izvo zvinoderedza mutengo wezvehupfumi nepo uchiwedzera kuomarara, simba (kutambanudza uye kusagadzikana kusagadzikana), kuchena uye kupera kwemeso kwechigadzirwa, uye kunonatsiridza kugadzirisa mashandiro epolymer.
Anoshanda mwenje calcium carbonate
Ichi chigadzirwa chinoshandisa chemhando yepamusoro calcite senge mbishi zvinhu, uye inogadzirwa nemakemikari nzira ine epamberi yekugadzira michina uye yakasarudzika mafomula. Iyo chena yakasimba, isina kunaka uye isina hwema. Mushure mekurapa kwekumisikidza, iyo saizi yekuparadzira saizi ndeye yunifomu uye yakanyanya hydrophobic. Kunaka kwakanaka, kubwinya kwakanaka, uye hukuru hwekuzadza vhoriyamu. Inogona kudzora kusakara kwekugadzirisa michina, kugadzirisa chigadzirwa kugadzirwa tekinoroji, kugadzirisa chigadzirwa kuita, uye ine iri nani yekusimbisa mhedzisiro.
Inoshanda inorema calcium calcium carbonate
Heavy calcium carbonate inogadziriswa kubva kumusoro-kuchena kwechisikigo calcite. Chinhu chikuru chinonzi CaCO3. Iyo ine yakagadzika makemikari zvivakwa, ingangoita isinga nyungudike mumvura, gobvu rekristaro dhizaini, yakatsetseka pamusoro, yunifomu inove saizi, yakanaka yekugadzirisa mashandiro, uye yakaderera DOP oiri yekumwa. Yakagadziriswa inorema calcium carbonate iri mushure mekurapa kurapwa, iyo mamorekuru chimiro chinoshanduka, iyo saizi yekuparadzira saizi yunifomu, uye yakanyanyisa hydrophobic. Kunaka kwakanaka, kubwinya kwakanaka, uye hukuru hwekuzadza vhoriyamu. Inogona kudzora kusakara kwekugadzirisa michina, kugadzirisa chigadzirwa kugadzirwa tekinoroji, kugadzirisa chigadzirwa kuita, uye ine iri nani yekusimbisa mhedzisiro.
Chiedza calcium carbonate
Ichi chigadzirwa chinoshandisa chemhando yepamusoro calcite senge mbishi zvinhu, uye inogadzirwa nemakemikari nzira ine epamberi yekugadzira michina uye yakasarudzika mafomula. Iyo chena yakasimba, isina kunaka uye isina hwema. Iyo huwandu hwehukama i2.71. Inoora pa825 kusvika 896.6 ℃ uye inoora kuita calcium oxide uye kabhoni dhayokisaidhi ingangoita 825 ℃. Nzvimbo inonyungudika iri 1339 ° C, uye nzvimbo inonyungudika iri 1289 ° C pa10.7 MPa. Hazvina kunyatso kusimba mumvura uye doro. Iyo inonyungudika mu dilute acid uye inoburitsa carbon dioxide panguva imwechete, ichiratidza kushamisika kuita. Zvakare zvinogadziriswa muammonium chloride mhinduro. Zvinenge zvisingasviki mumvura.
Inorema calcium carbonate